UN – democracy for burma
#Myanmar #Ceasefire #Draft #historic and #significant
On March 31, 2015 March 31, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, Draft Nationwide Ceasefire Agreementေ, government, MYANMARLeaveacomment
The talks have been complicated by renewed fighting in the Kokang region of Shan state, where ethnic Chinese rebels have engaged in fierce battles with Myanmar security forces since February. The Kokang rebels are not part of the peace negotiations. A deal has also remained exlusive with ethnic rebels in Kachin state.
The agreement came shortly after the seventh round of ceasefire talks between the UPWC and NCCT. The parties discussed all points included in chapters 1 to7from March 17-22 in Yangon. They resumed talks on March 30 to discuss the remaining points afteraseven-day break.
Hla Maung Shwe from the Myanmar Peace Centre (MPC) said atapress conference: “Both sides have agreed to all points in the ceasefire deal draft. Leaders from the two sides will meet again at 10am tomorrow. We will finalise all the agreed points. Leaders will signapreliminary agreement after seeing the meeting documents.”
A coalition of ethnic militias formed the NCCT in early November 2013. The NCCT initiated ceasefire talks with the UPWC on November4and5that same year. There have been seven official meetings andaseries of informal talks to date.
NCCT leader Naing Han Thar said: “There were many blockages at the beginning of the talks. The NCCT and the UPWC have reached an agreement on the ceasefire deal draft thanks to our patience and mutual understanding. But we need to further discuss some points. The NCCT alone has no authority to ink the nationwide ceasefire pact. We need to hold discussions on the agreed points by inviting leaders from all groups. These points are to be reported to the leaders at the meeting. Then, the leaders are to make decision on the agreed points.”
The NCCT plans to hold an armed national races group summit in April to seek the approval of ethnic minority leaders. However, the NCCT has yet to secureavenue for the summit, according to the NCCT.
Speaker of the Union parliament Thura Shwe Mann sentacongratulatory message to the negotiating parties in honour of yesterday’s talks. cr.EMG
The United Nations today praisedadraft ceasefire deal aimed at ending Myanmar’s decades of civil war, hailing the text agreed between the government and an array of ethnic armed groups as “historic and significant”. The UN, which has acted as an observer to months of peace negotiations, said the tentative deal wasa“milestone” for Myanmar, after the country’s president signed the draft national ceasefire with armed rebel groups today. “For the government of Myanmar and 16 Ethnic Armed Groups to reachaceasefire agreement after more than sixty years of conflict isahistoric and significant achievement,” it said inastatement on behalf of UN Special Adviser Vijay Nambiar. A full agreement can only be signed afteraconference of the ethnic armed groups for which no date has yet been set. Myanmar’s quasi-civilian regime has set nationwide peace asakey goal of its reforms ahead of crucial elections expected in November. http://yangon.sites.unicnetwork.org/2015/03/31/statement-on-behalf-of-special-adviser-vijay-nambiar-2/ photocr. Nyo Ohn Myint
Draft Nationwide Ceasefire Agreementေ
#Burma #Myanmar #slams #UN for #using #term #Rohingya’
On February 4, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Myanmar slams UN for using term ‘Rohingya’
Myanmar on Wednesday slammedaUnited ­Nations official for using the term Rohingya to describeapersecuted minority that the ­government refers to as Bengali, which implies they are illegal immigrants from neighboring Bangladesh.
Most of Myanmar’s 1.1 million ethnic Rohingya Muslims are stateless and live in apartheid-like conditions in Rakhine state in the west of the predominantly Buddhist country.
The UN Special Rapporteur on Human Rights in Myanmar, Yanghee Lee, said conditions were “abysmal” in camps where almost 140,000 Rohingya remain after being displaced in clashes with ethnic Rakhine Buddhists in 2012.
Myanmar’s foreign ministry criticized her remarks on ­Wednesday inapress release ­published inastate-backed newspaper.
On January 21, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ခဲ့ပြီးတိုင်း“ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ” ပြဿနာကို အမြဲ မီးထိုးပေးပါတယ်။ သူတို့ ခြေလှမ်းတွေကို စောင့်ကြည့်ဖန် များလာတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ပြောဆို၊ လုပ်ကိုင်မှုတွေက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လုပ်နေတယ်လို့ ယူဆစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာက နေပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲကို ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန် တက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်စရာ၊ သတိပေးစရာတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲက ဘင်္ဂါလီကိစ္စကို မီးထိုးပြီး ပြန်သွားပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တိုက်တွန်းချက် ထွက်လာပါတယ်။ တစ်ဖက်သတ် ဆန်လွန်းတဲ့ တိုက်တွန်းချက်ပါ။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စရန်ဟီးလီ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒုတိယအကြိမ် ရောက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇူလိုင်မှာ ပထမဆုံး လာခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်ကနေ ၁၆ ရက်အထိ ကြာမြင့်တဲ့ မစ္စရန်ဟီးလီရဲ့ ခရီးစဉ် အဆုံးသတ်မှာလည်း ဘင်္ဂါလီ ကိစ္စကိုပဲ မီးမွှေးပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်၊ သူ မပြန်ခင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ခရီးစဉ်အတွက် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကို သူကိုယ်တိုင် ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ နီးပါးက ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီ အရေးပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ် ကိုးရက်တာ ကာလမှာ သုံးရက်က ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အချိန်ကုန်ခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂါလီ အရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကုလသမဂ္ဂရော၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါ ကျွန်တော်တို့ ထောက်ပြနေတာက သတင်း အမှားတွေ ရနေသလား ဆိုတဲ့ အချက်ပါ။ သတင်းအမှားကို မှားမှန်း သိပေမဲ့ သတင်းမှန် လုပ်ချင်သူတွေလည်း သူတို့ဆီမှာ ရှိနေပါတယ်။ စိုးရိမ်စရာပါ။
မစ္စရန်ဟီးလီက သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယ ခရီးစဉ်အစမှာ လူ့အခွင့်အရေး တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူတွေ၊ နိုင်ငံရေး သမားတွေနဲ့ ဦးစွာတွေ့ပါတယ်။ ပြဿနာ မရှိပါဘူး။
ရခိုင်က ပြန်လာပြီး ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာသမား တစ်ချို့ကို တွေ့ချိန်မှာတော့ မေးခွန်း ထုတ်စရာ ပေါ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုစံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် ထားပြီး ရွေးချယ်ခဲ့သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။
မစ္စရန်ဟီးလီးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မီဒီယာသမား ခြောက်ဦး ရှိပါတယ်။ ဦးသီဟစော၊ ဦးဆန်နီဆွေ၊ ဦးစည်သူအောင်မြင့်၊ စာရေးဆရာမ မသီတာ(စမ်းချောင်း)၊ ဦးတိုးဇော်လတ် နဲ့ ဦးကျော်စွာမိုးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကို ပြန်ပြီး ဆန်းစစ်တဲ့ အခါ ဦးသီဟစောက မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးဆန်နီဆွေက မဇ္ဈိမ သတင်းစာရဲ့ အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် ထောက်လှမ်းရေး ခေတ်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်ကို ပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အရင် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိချုပ်ရုံး၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဌာန ဌာနကြီးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဆွေ (အငြိမ်းစား) ရဲ့ သား ဖြစ်ပါတယ်။ မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနဆိုတာ တစ်ချိန်က မြန်မာအစိုးရ အတိုက်အခံ မီဒီယာတစ်ခု အဖြစ် အိန္ဒိယမှာ တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အခုချိန်မှာ အဲဒီဂုဏ်ဒြပ် မရှိတော့ပါဘူး။
နောက်တစ်ဦးက ဦးစည်သူအောင်မြင့်ပါ။ သူ့ကို ဘယ်လို အနေနဲ့ ဖိတ်ကြားခဲ့သလဲ မသိပါ ဘူး။ မဇ္ဈိမ သတင်းစာရဲ့ ပင်တိုင် ဆောင်းပါးရှင် ဖြစ်တာမို့ မဇ္ဈိမ တစ်ခုတည်းက နှစ်ဦး တက်တယ်လို့ ယူဆရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ မသီတာ (စမ်းချောင်း) က PEN Myanmar ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပဲ့တင်သံ သတင်းဂျာနယ်ကို ဦးဆောင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတိုးဇော်လတ်က DVB သတင်းဌာနကပါ။ ဦးကျော်စွာမိုးက ဧရာဝတီ သတင်းဌာန အင်္ဂလိပ်ပိုင်းက အယ်ဒီတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စရန်ဟီးလီ တွေ့ခဲ့တဲ့ မီဒီယာသမား အများစုက မွတ်ဆလင် အရေးကို စောင်းပေး ပြောကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနဆိုရင် ဘင်္ဂါလီတွေ ဘက်ကချည်း ရပ်တည် ရေးသားလို့ လူထုကြားမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာ ရှိပါတယ်။
သူတို့ ခြောက်ဦးထဲမှာ ပါတဲ့ ဦးစည်သူအောင်မြင့်က အထူး ပြောစရာ မလိုပါဘူး။ အစ္စလာမ်မစ် အစွန်းရောက်တွေ တည်ထောင်ထားတဲ့ မွတ်ဆလင် ဝါဒဖြန့်ချိရေး Mmedia က သူတို့ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာမှာ နေရာပေး ဖော်ပြလောက်ရတဲ့ အထိ ဆောင်းပါးများစွာ ရေးခဲ့ပါတယ်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ထဲမှာ သူရေးခဲ့တဲ့ စာတွေအရ ဘင်္ဂါလီ အရေးမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေကို အပြစ် ဖို့ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ တွေ့ရပါတယ်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်ထုတ် မြန်မာတိုင်းမ်ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့
“လောင်မြိုက်နေဆဲ ရခိုင်” ဆောင်းပါးမှာ ဒီအချက်ကို အထင်အရှား တွေ့ရပါတယ်။ Continue reading “!!! #မစ္စရန်ဟီးလီနဲ့ မစ္စတာဘန်ကီမွန်တို့ #သိထားဖို့က ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဟာ #ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနဲ့ #ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာများကြားက ပြဿနာ မဟုတ်ပါခင်ဗျာ” →
#ရန်ဟီးလီ #အား #ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများ
On January 8, 2015 January 8, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ရန်ဟီးလီ အား ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေကြသူများ
၈ . ၁ . ၂၀၁၅ ညနေ ၅း၃၀ နာရီ ။ စစ်တွေလေဆိပ် ။
အမျိုးသား အမျိုးသမီး ၃၀၀ နှင့် သံဃာ ၁၀၀ ခန့် ။ PHOT CR. Than Tun Than
# နေ့တွင်ကျင်းပသော (၆၉) ကြိမ်မြောက် #ကုလသမဂ္ဂ
On January 7, 2015 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
၉-၁၂-၂၀၁၄ နေ့တွင်ကျင်းပသော (၆၉) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံတွင် တင်သွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအား နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရေး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၅-ခုနှစ် ဇွန်န၀ါရီလ (၄) ရက်
၁။ ၂၉-၁၂-၂၀၁၄ နေ့တွင်ကျင်းပသော (၆၉) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအား နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှပြည်သူများက မိမိတို့နိုင်ငံအတွင်း သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် လူမျိုး လုံးဝမရှိကြောင်း ဆန္ဒပြဖော်ထုတ်ငြင်းပယ်ခဲ့ကြပြီး၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင်ကလည်း ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မြန်မာနိုင်ငံတွင် လုံးဝမရှိကြောင်း အတိအလင်းဖော်ထုတ် ကြေငြာမြွက်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်မျိုးသားလုံးက ငြင်းပယ်ထားသော သမိုင်းလိမ် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် အပြည့်အ၀ အသိအမှတ်ပြုရန် (၆၉) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုချမှတ်ခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ရင်တွင်း ဆန္ဒမှန်များကို ဆန့်ကျင်၍ အတင်းအဓမ္မ လိုရာဆွဲ ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အချာ အာဏာကို စွက်ဖက်ထိပါးမှုဖြစ်သည့်အပြင် ရခိုင်အမျိုးသားများ၏ ရခိုင်ပြည်နယ် နယ်မြေတည်တံ့မှုကို တိုက်ရိုက်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သဖြင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၏ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်အား ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက လုံးဝပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်။
၄။ ဤသို့ မတရားသော အင်အားသုံး ဆုံးဖြတ်စွက်ဖက်မှုများကို လိုအပ်သော နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။
( ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မီတီ၏ ၃-၁-၂၀၁၅ နေ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် )